Bezinhlamvu zemali Electric - grinder encane nge igama bezihlahla ngaphezulu ajwayelekile. Ihlangene, nezindlu ukuma side ezibekwe i motor ngogesi kanye chuck ligijima, lapho ukunamathislwa ukusebenza kufakwe. Ngokucindezela inkinobho isiqalo, uqala ukujikeleza snap. Ijubane Ukujikeleza bengase bazikhandlele amashumi amaningana ezinkulungwane linemibhikisho / imiz.
imisebenzi ehlukahlukene kungaba kwenziwe, kuye umlomo wombhobho:
Ukwahlukana kusuka shlifmashanok
Isici umsiki - wosayizi omncane imikhiqizo ukucubungula. Kuyinto esisemqoka usebenza izikhala ezihambisanayo. Compactness womqophi kwenza amalebula, umsebenzi encane sokubuyiselwa, ukukhiqiza eziyisikhumbuzo.
Ukusebenza - ihhashi main
Ukuze kube lula, womqophi kagesi ifakwe izakhi ezengeziwe lula futhi lula umsebenzi ngethuluzi. Lining injoloba ezidingekayo zokulondoloza kangcono idivayisi ngesikhatsi kokuhlinzwa. I ukukhiya indlela inkinobho ukukhululwa obviate isidingo zokulondoloza okuqhubekayo. inkinobho yokuvala Uthi lokuphotha ikuvumela ukuba kwamandla ukukhiqiza ushintsho imishini, njll Bezinhlamvu zemali ukusebenza itholakala compactness yabo namandla. Njengoba ezothatha isikhundla umlomo wombhobho, kungenzeka ukuba enze ezahlukene zemisebenzi.
womqophi Electric ingasetshenziswa zonke izigaba processing, ekuqaleni ziphethe sekugcineni anolaka.
Imibuthano ukugaya nokuhlanganisa ezipholisha uyonika iphathwa ebusweni olubushelelezi futhi kukhanye.
Emabhulashini udinga ukususa nokugqwala kuhlanzwe ezivuzayo.
Ukuphuca akwazi ukugcina ewusizo ongabheka kuyo ukuze ukusika izingxenye ezincane workpiece futhi ahlelembe emaphethelweni.
Zibekele sokuzivivinya kanye Milling bezihlahla - ukuze kwakhiwe izimbobo futhi Milling ebusweni.
Abrasives - I-sanding kanzima ukuze afinyelele izindawo.
Izimpaphe - umsebenzi oqoshiwe (ukusebenza imibhalo kanye amaphethini).
Kungani udinga ulungise umkhawulo ijubane?
Modern etcher kagesi ifakwe idivayisi ngokulungisa ijubane ukusebenza izindlela. It ikuvumela ukuba wenze ngendlela ofisa ngayo ithuluzi ekucubunguleni tintfo letitinhlobonhlobo ubulukhuni. I nohlu olubanzi ukulungiswa, izici umgomo ngaphezulu imodeli. Lilungiselele idivayisi, ungasebenzisa electronics esakhelwe noma ngesandla.
Umphini Nezimo ngoba kanzima ukuze afinyelele izindawo
Umphini Nezimo - kumane nje hose eside phakathi kwako ikhebula. Omunye ukuphela kwayo eqondiswa ingxenye yokusebenza ithuluzi, ngakolunye okunamathiselwe isilungisiwe. Lapho ithuluzi ivuliwe, torque idluliselwa ku snap-ngokusebenzisa kushaft nezimo.
Umphini Nezimo - kulula ukusebenza
womqophi Electric ubambe kunokukwenza kushaft nezimo. Umphini Nezimo yokukhanya, kungaba ukuyona iminwe futhi sisebenze ngokubambisana ipeni obungangenhloko kakhanjana. Ngiyavuma, indlela kuyinto ababewazi. Ukusebenza tooling ezinjalo ongenza kokuqeda imikhiqizo, sisebenzise mncane kakhulu futhi emihle lettering amaphethini.
Khetha amandla womqophi
Amandla - lena umthelela umsebenzi. Ukuze zokusebenzisa ukhuni noma plastic yithuluzi elinamandla ayidingeki. Engingakusho nje 100-160 Watts. Umbhalo imibhalo eqoshiwe kwakudingeka Watts 35 nje. Oluthandwayo amandla okusezingeni eliphezulu (300 W) abona kudingekile ukuba akunike umsiki kwekhethelo ukusebenza ngamatshe, ngensimbi, ingilazi preforms.
Kumele sikhumbule ukuthi namandla kakhulu liyithuluzi, nzima womqophi kagesi. Impendulo kulabo abasebenzisa lo mshini, ingxenye enkulu omuhle.
Uphethiloli inverter ukuze 3 kW: izibuyekezo abakhiqizi
Isinkwa umenzi Gorenje BM900W: ukubuyekezwa, imiyalelo
Umshini "Lava": Uhlolojikelele kanye Izinzuzo
Amamitha amanzi amaningi: ukubuyekezwa. amamitha amanzi: ukufakwa, iseluleko okukhetha
Thermostat: indlela ukufaka kurediyetha?
Amanzi ahlanzekile emthonjeni. A isihlungi ekwelapheni amanzi emithonjeni
Indlela ukukhetha yangasese ekhoneni?
Thymol lesampuli nokubaluleka zokuxilonga
Gymnastics Morning ukunikeza injabulo
Sinupret: Ukubuyekeza, ukusebenza kahle, ukuphepha.
Uchungechunge oluthi "angaphezu kwawemvelo." I Crowley idemoni: incazelo, izici futhi amaqiniso athakazelisayo
Lucca (Italy) Izikhangibavakashi (isithombe)
I nokuqoshwa imithetho Russian Empire ngaphansi Nicholas 1: usuku, kukhona
Ingabe Running ukususa isisu ezinhlangothini ngaphandle ngokuzincisha ukudla?